कहिल्यै १२ नबज्ने यो घडी, आखिर किन बज्दैन यो घडीमा १२ ?
एजेन्सी । सामान्यतया हाम्रो देशमा १२ अंकलाई अशुभ मानिन्छ । तसर्थ मानिसले बोलीचालीमा पनि सोध्ने गर्दछन् की तपाईको अनुहारमा किन १२ बजेको छ ?
तर तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ की विश्वमा यस्तो घडी पनि रहेको छ जसमा कहिल्यै १२ बज्दैन । यसको पछाडिको रहस्य जानेपछि तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ । यो अनौठो घडी स्विट्जरल्यान्डको सोलोथर्न शहरमा रहेको छ ।
यस शहरको टाउन स्क्वायरमा एक घडी लगाईएको छ । उक्त घडीमा घण्टाको ११ अंक मात्र रहेको छ । त्यसमा १२ अंक गायब छ । यहाँ कैयौं अन्य घडीहरु पनि रहेका छन् जसमा १२ बज्दैन । यस शहरको सबैभन्दा विशेषता के रहेको छ भने यहाँका मानिसहरुलाई ११ अंकसँग एकदमै लगाव रहेको छ । यहाँका जे वस्तुको पनि डिजाइन ११ नम्बरको आसपास घुम्ने गर्दछ ।
यस शहरमा चर्च र चैपलहरुको संख्या ११–११ नै रहेको छ । यसका अलावा विभिन्न संग्राहलय, ऐतिहासिक भवनहरु पनि ११ नम्बरका रहेका छन् । ११ नम्बर प्रति मानिसहरुको यो विश्वास परापूर्व कालदेखि नै मान्यता रहँदै आएको पाइन्छ ।
भन्ने गरिन्छ की कुनै समय यहाँका मानिसहरु एकदमै मिहिनेत गर्थे । तापनि उनीहरुको जीवनमा सुख प्राप्त भएन । केही समयपछि पहाडबाट एलियन आउन लागे र उनीहरुलाई सहानुभूती दिन लागे । एलियनको आगमनसँगै उनीहरुको जीवनमा सुख प्राप्त भयो ।
यि हुन साग खेलकुदका सात तस्विर